Waa maxay bogga natiijooyinka Google ee laga sameeyey?
Maalmahan, wershada raadinta dhijitaalka ah ayaa si guul leh u kobcisay shabakadda caalamiga ah ee internetka, halkaas oo aan ka heli karno suurtogalnimada wax soo-saarka ama adeegga loo baahan yahay maalin kasta. Iyo inta badan ee naga mid ah oo noocan oo kale ah sida warshadaha waaweyn ee warshadaha, oo sidoo kale loo yaqaano bogga natiijooyinka Google, ama Bogga Search Engine Results (SERP) inuu noqdo mid sax ah. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, bogga natiijooyinka Google waa wax aad u ballaaran oo ka badan bogga jawaabaha ka jawaabaya codsi raadin (haddii kale, su'aalaha muhiimka ah). Ku dhajinta Ingiriisi cad, waa dahab la buuxiyo fursado aan la tirin karin oo loogu talagalay dadka oo dhan: celceliska isticmaalayaasha, bixiyeyaasha adeegga, saarayaasha, dukaamada, ganacsatada, iyo wixii la mid ah - create mobile app php. In kastoo, si aad u isticmaasho isticmaalka saxda ah ee fursaddan weyn, waa in uu fahmo qawaaniinta asaasiga ah ee ciyaarahan weyn. Waxaan u jeedaa halkan shabakadda bogga raadinta Google waxay leedahay faa'iidooyin badan iyo qalab kala duwan oo loo isticmaalo badeecad kasta oo casri ah.
Haddaba, maxaan ka ogaan doonaa SERP inay sii socoto muraayad cusub? Aan aragno saddexda qaybood ee ugu muhiimsan ee bogga natiijooyinka Google:
Natiijooyinka raadinta ee lacag bixinta (xayeesiinta PPC)
Natiijooyinka raadinta maxalliga ah (a. k. a. Google My Business)
Natiijooyinka raadinta abaabulka
Raadinta lacag bixinta
Raadinta lacag bixinta, kor u qaadista internetka ee muuqaalka qaybta gaarka ah ee kor ku xusan SERPs. Laga soo bilaabo hal gacan, raadinta Google-ka wuxuu bixin karaa xalka ugu dhaw ee qof kasta oo cajiib ah. Dhanka kale, raadinta lacag-bixinta waxay bixisaa ROI wanaagsan ee milkiilayaasha ganacsiga. Dabcan, iyada oo la bixinayo in ololeha kobcinta dijitaalka ah ay si sax ah u maamulaan. Xayeysiinta raadinta ee lacag bixinta waa la bilaabi karaa waxaana loo qaabeyn karaa Google AdWords. Waxaa jira laba hab oo asaas ah oo rikoodhka riixa ah ee raadinta Google:
Xayeysiisyada asalka ah ee PPC ayaa had iyo jeer lagu muujiyaa bogga natiijooyinka Google ee calaamada cagaaran ee "Ad" loo soo gaabiyo si loogu aqoonsado sida ganacsiyada.
Xayeysiiska iibsiga Google wuxuu ka muuqan karaa laba siyaabood oo kala duwan - midigta midigta bogga natiijada ama khadka sare ee SERP. Xayaysiinta wax iibsiga mar walba waxaa lagu soo bandhigaa "Taageero" si ay si sahlan u xaqiijiyaan badeecada.
Raadinta maxalliga ah
Natiijooyinka raadinta maxalliga ah ayaa badanaa lagu soo bandhigaa marka user uu raadinayo alaab gacmo iyo adeegyo oo u dhow. Natiijooyinka maxaliga ah waxaa caadi ahaan lagu muujiyaa laba siyaabood oo kala duwan - iyada oo la adeegsanayo liiska maxaliga ah (khariidadda khariidada ah oo lagu daray liiska saddexda liisaska ganacsiga), ama liis garaynta aqoonta (shay la socota dhamaan xogta laga heli karo ganacsi kasta).
Natiijo baadhista ah
Natiijooyinka raadinta dabiiciga ah waa natiijooyin caadi ah, raadinta codsi raadin ah markaad geliso bogga Google. Habkan, liistada raadinta ee dabiiciga ah (mar kasta oo aan la bixin, ugu yaraan si toos ah) ayaa loo kala saaraa in ka badan 200 oo arrimood oo isbarbar dhiga ee Google adeegsigooda raadraaca ah ee qiimeyn buuxda ah si loo siiyo go'aan kama dambeys ah.
Dhamaan arrimahan isudheellitirka ah waxaa xakameynaya fikrad ballaaran oo ah Mashiinka Raadinta (SEO). Inta badan, dadaalka ugu weyn ee SEO ah ayaa xoogga saaraya in baabuur badan oo bani'aadam ah loo mariyo website-ka, hagaajinta muuqaalka internetka ee natiijooyinka raadinta ee aan la bixin. Sidaa oo kale, bartilmaameedka caalamiga ah ee SEO ayaa weli ah dhammaan dhismaha, dhisida, iyo ilaalinta boggaga shabakada si fudud loo fahmi karo makiinadaha raadinta iyo kuwa isticmaala.